China ukusonga ikreyiti kunye Factory | Lonovae
Imifuno yokuSonga imifuno yibhasikithi esetyenziselwa iivenkile ezinkulu ukuba ibe nemifuno, iziqhamo kunye nokutya okulula Siyi-Lonovae sibonelela ngeebhokisi zePlastiki ezisemgangathweni. Ikreyiti ebonelelweyo yenziwa ngoncedo lwempahla ephezulu ekrwada ngokwemigangatho yamanye amazwe. Abathengi banokufumana le crate kuthi ngobukhulu obahlukeneyo, uyilo, imibala kunye nobukhulu ngokweemfuno zabo.
Igama lemveliso Yokusonga Crate-01
Ubukhulu 600 * 400 * 110mm
Izinto eziphathekayo I-PP
Ukupakisha 10PCS / ibhokisi
Igama lemveliso Yokusonga Crate-02
Ubukhulu 600 * 400 * 170mm
Igama lemveliso Yokusonga Crate-03
Ubukhulu 600 * 400 * 220mm
Igama lemveliso Yokusonga Crate-04
Ubukhulu 600 * 400 * 300mm
Uzinzo 1.High: Thina umsebenzi ngokugqibeleleyo kwaye umthwalo umthwalo ethwele. Ezantsi kunemigca emininzi eyomeleleyo yokuqinisekisa ukuba akukho xinzelelo kuxinzelelo.
2. Ubunzima bokukhanya.
3. Ukugqiba kakuhle: Sinokusika okuthe tye. Sisebenzisa ukusika i-lasering kunye ne-punch kunye ne-shear ngexesha elinye. Kukho ukusika okugudileyo kwaye akukho lunwele lufuna.
4.Long Life: Sisebenzisa yonke entsha PP vigin materils. Sivavanya izinto ngovavanyo lomgangatho we-SGS kunye ne-garantee esemgangathweni.
5. Ulwakhiwo oluqinileyo.
6.Sinokuzenzela ii-logo zabaxhasi bethu ngenxa yeemfuno.
7.Sineendawo ezininzi zokugcina kunye neminyaka emininzi yokuvelisa ukuthumela iimpahla ngokukhawuleza.
Kwiimfuno ezikumgangatho ophezulu, thina baseLonovae sinenqwaba yoomatshini bokubumba inaliti yaseHaiti, kwaye sisebenzisa iimoto zamatye eSino-Korea, njl. -Iipetroli zeKorea. . Ukulungiselela ukuthengisa abathengisi abakhulu basekhaya nabangaphandle, sinamandla okubonelela, kunye nomndilili wemveliso yemihla ngemihla engaphezulu kwama-10,000 amaqhekeza eeplastiki ezinje ngeebhasikithi zokuthenga kunye neepelethi. Inkampani yethu ibambelela kwimimiselo yenkonzo yokuseka ishishini ngokunyaniseka kunye nokuphumelela ngomgangatho, kwaye ikhonza abathengi bethu ngentliziyo iphela.
Sineqela eliphandayo elikumgangatho ophezulu ukuvelisa, ukuyila kunye nokukhonza.
Sinezolawulo olungqongqo lovavanyo lwemveliso. Sinenkqubo elungileyo, indawo yovavanyo egqwesileyo kunye namanqanaba olawulo akumgangatho wokuqala wokunika iimpahla ezikumgangatho ophezulu.
Sinezinto ezahlukeneyo zemveliso kunye nolwakhiwo olutsha, inkqubo echanekileyo.
Egqithileyo Iziqhamo zemifuno yokusonga ikreyiti